IPodcast 9 × 07: IApple imamela abasebenzisi kwaye ilungise | Ndisuka mac
Iveki enye i-iPhone kwaye ndivela kwiqela leendaba le-Mac zidibene ukuze zithethe malunga neendaba zamva nje ezinxulumene nelizwe le-Apple. Saqala ukuthetha malunga neendaba zokuba uhlaziyo lokuqala olukhulu lwe-iOS 11.1.1 luza kusizisela, iindaba ezingezizo, kuba ziyimisebenzi uthathe umhlala-phantsi ngokukhutshwa kwe-iOS 11 ngokungaqondakaliyo nangokuthe cwaka. Siphinde sathetha malunga neengxaki zebhetri ukuba inani elikhulu labasebenzisi liyasokola, iingxaki ezibonakala ngathi zisonjululwe kwi-betas yokuqala ye-iOS 11.1.
Sikwabeka izimvo malunga nokuba semngciphekweni okuye kwafunyanwa kwiprotocol ye-WPA2, ubungozi obuchaphazela nasiphi na isixhobo esinonxibelelwano lwe-Wi-Fi kwaye sisebenzisa le protocol. U-Apple ubanga ukuba sele elungisile olu bungozi kwiibhetas zeenkqubo zokusebenza asebenza kuzo, njengoko esenza iMicrosoft, ngelixa UGoogle ubonakala eyithatha kancinci kunesiqhelo, ngaphandle kwento yokuba izixhobo ezilawulwa kwi-Android 6.0 zezona zinika eyona ngozi.
Njengazo zonke iiveki, ukuba ufuna ukuthetha nathi ngelixa usenza ipodcast, ungayenza ngeyethu Isiteshi se-YouTube kwaye wenze izaziso ukuze ufumane isaziso ngalo lonke ixesha sifika emsebenzini. Kodwa ukuba ukhetha ifomathi yeaudiyo, unokumamela nathi kwisicelo sakho sePocast Ukubhalisela ngaphambili kwisiteshi sethu kwi-iTunes, Ukuze isiqephu ngasinye esirekhodayo sikhutshelwe ngokuzenzekelayo kwisixhobo sakho. Ukuba uyawuthanda umculo oviweyo kwiPodcast kunye Ungabasebenzisi boMculo weApple, ungaya kuluhlu lokudlala esilwenzileyo kwinkonzo yomculo yokusasaza iApple.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » IPodcast 9 × 07: IApple imamela abasebenzisi kwaye iyilungise